महिलाले नि जोत्छन् हजूर !
२०७६ बैशाख १२ बिहिबार, काठमाडौं । पहिले यस्तो समय थियो कि महिलाले जोत्नु हुँदैनथ्यो । महिलाले मात्र होइन बाहुनलाई पनि हलोको अनौ समाउन दिइँदैन थियो । ... बाँकी अंश»
अब सेल्फी खिचाउने जनावरको पालो !
२०७६ बैशाख १० मंगलबार, काठमाडौं । पछिल्लो समय मानिसहरुमा सेल्फीको क्रेज बढेको छ । मानिसमा बढेको सेल्फीको क्रेज अब भने जनावरहरुमा पनि सरेको छ । केही जनावर फरक फरक पोजमा सेल्फी खिचाउँदै गरेको देखिएको छ । कंगोको नेशनल पार्कमा पनि यस्तै एक दृश्य देखिएको छ । ... बाँकी अंश»
यस्ता तानाशाह जसले विवाहको भोलिपल्ट गरेका थिए आत्महत्या
२०७६ बैशाख ९ सोमबार, काठमाडौं । संसारमा धेरै किसिमका सन्की शासक देखिएको छ । त्यसमा पनि हिटलरको नाम सुन्दा अहिले पनि मानिसको रौं ठाडा हुन्छन् । हिटलरको जीन्दगीको विषयमा जोडिएका धेरै रोचक कहानी छन् । ... बाँकी अंश»
महीनावारीअघि छोरीको विवाह गरिदिए पुण्य हुने भन्दै बालबिवाह
२०७६ बैशाख ९ सोमबार, डोटी । विवाहका लागि कानूनी उमेर १८ वर्ष भएता पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा बाल विवाह गर्ने प्रचलन अझै पनि कायमै रहेको छ । ... बाँकी अंश»
यो मुलुकको मुद्रालाई खुट्टामा राखे हुनसक्छ १५ वर्षको जेल
२०७६ बैशाख ८ आइतबार, काठमाडौं । विश्वका धेरै अनौठा मुलुक मुलुक छन्, जसको आफ्नै किसिमको नियम तथा कानुन हुने गरेको छ । कुनै मुलुकमा निकै सामान्य मानिने केही मुलुक कुनैका लागि भने ठूलो अपराध बन्नसक्छ । ... बाँकी अंश»
यो कामको लागि चाहिदैन कुनै डिग्री, हप्तामा केवल चार दिन काम गर्दा पाइन्छ करोडौंको तलब
२०७६ बैशाख ६ शुक्रबार, काठमाडौं । सामान्य हिसाबमा मध्यवर्गका मानिसका लागि करोडौंको तलब मिल्नु एक सपनाजस्तो हुन्छ । मानिसहरु यसका लागि केही विशेष किसिमको खुबी हुनुपर्छ भन्ने सोच्छन् । तर, यहाँ यस्तो रोजगारीको विषयमा वर्णन गरिएको छ, जसका लागि न कुनै डिग्री चाहिन्छ, न कुनै विशेष किसिमको क्षमता । ... बाँकी अंश»
१९ हावाहुरी पीडित मृतकका परिवारलाई नगद सहयोग
२०७६ बैशाख ५ बिहिबार, काठमाडौ । नेपाल विद्यार्थी संघका निबर्तमान उपाध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले हावाहुरीमा परि मृत्यु भएका बाराका १९ जनाका परिवारलाई राहत रकम हस्तान्तरण गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
एक राजकुमारी जसलाई नपाएपछि १३ राजकुमारले गरे आत्महत्या
२०७६ बैशाख ४ बुधबार, काठमाडौं । इरानीकी एक राजकुमारीलाई नपाएपछि १३ जना राजकुमारले आत्महत्या गरेका थिए । जहरा खानम तदज एस सल्टानेह नाम गरेकी राजकुमारीका यति धेरै दिवाना थिए कि प्रस्ताव अस्विकारपछि आत्महत्या गरेका थिए । ... बाँकी अंश»
१२ बर्षकी बालिकाले आफ्नै कमाइबाट किनिन् बीएमडब्ल्यू कार
२०७६ बैशाख ४ बुधबार, काठमाडौं । जुन उमेरमा केटाकेटीहरु खेल्ने कुद्ने र नयाँ नयाँ खेलाउनाको शौक राख्छन् त्यो उमेरकी एक बालिकाले आफ्नै कमाईबाट गाडी किनेकी छन् । ती बालिका हुन् १२ बर्षीया नेथेनन। नेथेननले आफ्नो १२ औँ जन्मदिनमा आफैलाई बीएमडब्ल्यू सेडन कार गिफ्ट गरेकी छन् । ... बाँकी अंश»
जुँगा भएकी राजकुमारी, जसलाई आएको थियो १ सय ४५ देशका राजकुमारको विवाह प्रस्ताव
२०७६ बैशाख ३ मंगलबार, काठमाडौं । अहिलेको समयमा केटीहरु आफूलाई राम्री देखाउन विभिन्न उपायको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७६ बैशाख ३ मंगलबार, काठमाडौं । करिश्मा रावल सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत अछामकी स्थाई बासिन्दा हुन । सानैदेखि पृथक् लुक रुचाउने अनि त्यस्तै पोज दिन चाहने करिश्मा मोडलिङमा आफ्नो भविष्य खोज्दै छिन् । एयर होस्टेज बन्ने सोच बोकेर बानेश्वर स्थित एक एयर होस्टेज ट्रेनिङबाट कोर्स सकेकी उनी फुर्सदको समय मोडलिङमा ब्यतित गर्न चाहन्छिन । ... बाँकी अंश»
लादेन मार्ने मिशनमा सहभागी कुकुर भारतीय प्रहरीमा
२०७६ बैशाख २ सोमबार, काठमाडौं । सन् २००१ मा अमेरिकाको ट्विन टावर हमला सहित थुप्रै आतङ्कवादी गतिविधिको नेतृत्व गरेका अल कायदाका पूर्वप्रमुख ओसामा बिन लादेनलाई मार्ने अमेरिकी नेवी सील टीममा सहभागी बेल्जियन मालिनोस प्रजातिको कुकुरलाई मध्यप्रदेश प्रहरीले डग स्क्वायडमा सहभागी गराइएको छ । ... बाँकी अंश»
दायाँमा थियो घाउ, जब डाक्टरले काटे बायाँ खुट्टा
२०७६ बैशाख १ आइतबार, काठमाडौं । समयसमयमा डक्टरको लापरबाहीको कारण बिरामीको ज्यान जाने गरेको वा खासै ठूलो रोग नलागेको बिरामी पनि सिकिस्त हुने गरेको समाचार आउने गर्छन् । ... बाँकी अंश»
विश्वका सबैभन्दा खतरानक विमानस्थल, जसमा नेपाल पहिलो स्थानमा
२०७६ बैशाख १ आइतबार, खतरानक विमानस्थलको सूचीमा नेपालको तेन्जिङ–हिलारी एयरपोर्ट सबैभन्दा अगाडि छ । लुक्लामा रहेको यो विमानस्थलको रनवे ४६० मिटरको रहेको छ । साना हेलिकोप्टरहरु ल्याण्ड गर्न सकिने यो विमानस्थलको दक्षिणमा ६ सय मिटर गहिरो भीर रहेको छ । यो विमानस्थलमा उडानको अलिकति मात्र चुक हुन पुगेको खण्डमा बाँच्ने आशा नराखे पनि हुन्छ । ... बाँकी अंश»
राम नवमीका दिन यी १० भक्ति मार्गमार्फत् भेट्न सकिन्छ आर्थिक समृद्धि
२०७५ चैत ३० शनिबार, काठमाडौं । हामीले आर्थिक समृद्धिको धेरै नाराहरु रच्ने गरेका छौं । देशले एकातर्फ आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य लिएको छ भने अर्काे तर्फ हामी व्यक्तिगत समृद्धिको ... बाँकी अंश»
पूर्वप्रेमीसँग भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी कुरा
२०७५ चैत २९ शुक्रबार, काठमाडौं । ब्रेकअप केही मानिसका लागि सजिलो हुन्छ भने केहीको लागि यसले जीवनमा ठूलो धक्का दिन्छ । यस्तोमा धेरै मानिसहरु पूर्वप्रेमी-प्रेमिकासँग कुरा गर्दैनन् । तर, केही मानिसले भने साथीको रुपमा कुरा गरिरहेका हुन्छन् । यस्तोमा निम्न कुरामा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ– ... बाँकी अंश»
२०७५ चैत २८ बिहिबार, काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्सकी एक नवविवाहित महिलाले आफ्नो श्रीमानको बानीबाट आजित भएर तलाकको आवेदन दिएकी छन् । यूएईमा हनिमून मानउन गएकी उनले आफ्नो श्रीमानलाई कन्जूस बताउदै श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेदको दरखास्त दिएकि हुन् । ... बाँकी अंश»
आमाछोरी उडाउछन् विमान, चिन्नुहोस पाइलट को-पाइलट
२०७५ चैत २६ मंगलबार, काठमाडौं । यदि आफ्ना सन्तान ठूलो भएर आफ्नो काममा सघाउँछन् भने त्यो आमाबाबुको सबैभन्दा खुसीको पल हो । यस्तै घटना अमेरिकाको एक उडानको क्रममा देखिएको छ । यहाँ छोरीले आमालाई सहयोग गरेको नभई दुवैले एकसाथ विमान उडाएका हुन् । ... बाँकी अंश»
२०७५ चैत २६ मंगलबार, काठमाडौं । भनिन्छ कि कुनै पनि मानिस केही फरक गर्ने प्रयास गर्छ भने सफल हुन्छ । केही नयाँ गर्न सकेको खण्डमा मात्र उसलाई अघि बढ्न निकै सहज हुने गर्छ । भारतका २५ वर्षीय रितेश कुमार पनि केही नयाँ सोचको कारण सफल व्यवसायी बनेका व्यक्ति हुन् । ... बाँकी अंश»
तानाशाह किमका खान सकिने कपडा
२०७५ चैत २६ मंगलबार, काठमाडौं । उत्तर कोरियाका नेता किम जोन उनले आफ्नो फेसन उत्पादन गरेका छन् । लामो समयदेखि गरिबी र भोकमरीको चपेटामा रहेको आफ्नो मुलुकमा तैराकी, हाइकिङ र साहसी खेलका लागि प्रयोग हुने पहिरन उत्पादन गरेका हुन् । यी कपडाको विशेषता यसलाई आवश्यकता परेको समयमा खान पनि सकिन्छ । ... बाँकी अंश»